Ugeqa amagula uSbu Mpisane - Ilanga News
Home Izindaba Ugeqa amagula uSbu Mpisane
Uthi wazi ukuthi uShauwn uyinkosikazi yakhe
USOMABHIZINISI wodumo eThekwini, uSibusiso “S’bu” Mpisane ugeqa amagula ngokwenzekayo empilweni yakhe nomkakhe naye ongusomabhizinisi odumile uShauwn, osesilaxazile isibongo sakwaMpisane, wabuyela kwesakubo kwaMkhize.
UMpisane ucelwe yiLANGA LangeSonto ukuba acacise ngosekwenzeka ngesicelo esasifakwe ngumkakhe eNkantolo eNkulu yamaJaji, eThekwini nyakenye sokuba kudatshulwe incwadi yomshado, kanye nodaba lokuthi kwathiwa ufuna ukondliwa ngesizumbulu semali ewu-R200 000 ngenya-nga, kodwa okwagcina ngokuthi ijaji liluhlehlise lolu daba likhala ngokuthi aba-meli bakaShauwn, bakwaMaharaj Attorneys, babengazilungiselelanga kahle.
Kube wumzukuzuku intatheli imncenga ukuba aphumele obala ngezinkulumo ezisabalele ngesimo sempilo yabo selokhu bahlala ngokwehlukana eminyakeni embalwa eyedlule. Ugcine evumile, waqala waphawula ngendaba yokubuyela ku-kaShauwn esibongweni sakubo kwaMkhize.
“Ngiyazizwa izinkulumo zokuthi umkami akaseyena owakwaMpisane ekubeni ngamlobola ngazikhipha zonke, sashada. Ngokwami usenguNkosikazi Mpisane. Angikaze ngithole amaphepha angibizela enkantolo, amajaji akhipha incwadi yesahlukaniso, ngingazike noma sewangidivosa ngasese kodwa umthetho waleli zwe awukuvumi lokho,” kusho uS’bu.
“Nalezi zinkulumo zokuthi washadiswa nami engazi ngamanga aluhlaza lawo. Noma ngangingekho enkantolo kodwa ummeli wami u-Advocate Mxolisi Nxasane wangazisa ukuthi ijaji labakhalima abameli bakhe ngoba bona beza ngodaba lwesehlukaniso ekubeni thina sasize ngo-lwamafa.”
Ucacise nangendaba yokuthi ufuna ukondliwa nguShauwn ngo R200 000.
“Ngithanda nokuthi ngiqondise inkulumo yokuthi ngathi mina ngifuna ukondliwa ngumfazi wami. Empeleni ngathola amasamanisi angibizela enkantolo, yena uMa-Mkhize ethi ufuna ngimondle ngalesi samba semali ngenyanga ngoba ngiseyi-ndoda yakhe.
“Ngabe sengijuba ummeli wami ukuba ayosiphikisa, asho ukuthi uma ethi angimondle ngemali engaka akabuyise kimi umsebenzi wami wamaloli asezimayini noma kube nguye owondla mina ngale mali ayifuna kimi. Nginemali yami mina, ngeke ngondliwe ngumuntu wesifazane. Nalaba abangcolisa igama lami bethi angiyondli ingane yami ngababonisa ukuthi ayikho leyo nto.”
UMpisane uzwakalise nokungenami kwakhe ngabezindaba abathile abachaze ngokuthi bacheme nomkakhe, badansela isigingci sakhe.
“Asazi ngoba izinto seziyajika akusafani nakuqala, futhi namacala enkohlakalo okuselokhu awaphunga ngo 2004 asamlandela,” kusho yena ngomoya ofudumele.
Ebuzwa ukuthi njengoba izinto zinje ngabe iyaphi manje le nqola yabo, uphendule ngokuthi yena usalinde ukuba basho ukuthi bathini (uShauwn nabameli bakhe) ngoba yena (uMpisane) nabameli bakhe babathumela izimpendulo esicelweni sabo ababesifakile, inkantolo yababuyisela emuva.
Ummeli kaMpisane u-Adv Mxolisi Nxa-sane naye uhambe emazwini alowo ammele okuthi konke kumi ngakubameli baka-Shauwn, wathi kodwa uzogcina ebathintile kuzwakale ukuthi zimiph’ inkwali (kubambeni).
Ihhovisi labameli bakaShauwn ligcine lethembise ukuphendula emibuzweni ye-LANGA LangeSonto kodwa kwaze kwaba kufika isikhathi sokushicilela lingazibuyisanga izimpendulo.
knowledge.simelane@ilanganews.co.za USHAUWN UCELA KWELULEKWE UMPISANE ZAKHELE MCHUNU U-Shauwn Mkhize wenze isicelo kwabezindaba ukuba beluleke uSbu Mpisane ukusebenzisa wonke amangwevu anawo ukuhlenga iRoyal Eagles ingadliwa yizembe kwiGladAfrica Championship.
Eziphendulela uShauwn kokushiwo nguMpisane, uthe into embi ngokuhubhuza amanga wukuthi ugcina sewuwakholwa, kube sengathi aliqiniso kanti uyazikhohlisa. Uthe akaqondi ukuthi kungani uMpisane eqhubeka nokuzama ukuhudulela phansi isithunzi sakhe ngokufafaza izindaba ezingekho kuma-phephandaba.
“Ngingowesifazane ozimele, kangikaze nje ngifune ukondliwa empilweni yami,” usho kanje uShauwn eziphendulela odabeni lokuthi wafuna isondlo kuMpisane.
Lo somabhizinisi umile kwelokuthi nguMpisane owafuna isondlo sika-R200 000.
“Empeleni kangifuni ukulokhu ngiqophisana naye ngodaba luka-R200 000 ngoba iqiniso uyalazi, yinto ebhalwe phansi, esemaphepheni asenkantolo,” esho.
Mayelana namacala uMpisane azwakalise ukuthi alandela uShauwn, uthe akazi ukuthi ukhuluma ngamaphi ngoba wo-nke abesemehlweni omphakathi kwazise abelandelwa ngabezindaba, aqulwa aphela enkantolo.
Nokho ukugcizelele ukuthi uphawule nje, ngoba efuna ukubeka iqiniso kodwa empeleni akakuthandi ukukhuluma ngezindaba zakwakhe kwabamaphephandaba.
Esephetha uthe: “Ngiyanicela ukuba ningisize neluleke uSbu, kwazise nina niyakhuluma naye, ukuba agxilise umqondo wakhe ekulungiseni i-brand (i-Eagles) kusenesikhathi ukuze ihlengeke, ingagencwa yizembe. Phela sayi-sebenzela kanzima kabi siyakha. Siyacela ukuba ingashoni phansi, akabhukule manje ngoba isikhathi sisekhona. Makahlukane nokudicilela phansi igama lami, alungise umsebenzi abhekene nawo.”
UShauwn ukhuluma ngalolu hlobo nje, i-Eagles ibambe ibhuleki kwi-log yeGladAfrica ngamaphuzu awu-13 emidlalweni ewu-17 kanti ngesizini edlule ibibalwa namakilabhu abelwela ukunyukela kwi-Absa Premiership isalawulwa nguShauwn ne-ndodana yabo u-Andile.
UMpisane uyiphathe ngokuqala kwale sizini emuva kombango wobunikazi. UShauwn usanda kuphumela obala ngokuthi ufuna ukuphatha ikilabhu edlala kwi-Premier Soccer League (PSL) ngesizini ezayo. Kule sizini uShauwn usebenzisana neReal Kings esemshungwini wamaki-labhu alwela ukunqoba isicoco seGladAfrica.
Previous articleLusolwa “ngokuvubela impi” uNyazi
Next articleIzimpi ezikoleni ngeGcokama noKhuzani